पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनियाे, केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनियाे, केछ अवस्था ?
संखुवासभा । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ र ५ मा पर्ने ओयाङमा पहिरो खसेपछि आंशिक रुपमा अरुण नदी थुनिएको छ । आइतबार गएको पहिरोले प्रकाश राईको परिवारका सात जना विस्थापित भएका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लका अनुमार करीब ६ सय मिटरमाथिबाट झरेको पहिराले नदी थुनिँदा करीब तीन सय मिटर पानी जमेर ताल बनेको छ । स्थानीयवासी हीरालाल राईको घर र बिर्खबहादुर राईको गोठ उच्च जोखिममा परेकाले खाली गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मल्लले बताए ।
घटनाको विस्तृत जानकारी आइसकेको छैन । प्रहरीले अरुण आसपासको बस्ती, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहस्थल पुखुवा आसपास तथा हेलुवाबेँसी, चेवाबेँसी, मनकामनालगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई नदी छेउ नजान र सतर्क भएर बस्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै आइतबार बिहान भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको हो । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको तीनवटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्म टिमुरेका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण थापा मगरले बताए ।
आइतबार बिहान करिब ३ बजेतिर आएको बाढीले टिपर, एस्काभेटर र लोडरमा क्षति पुर्‍याएको छ उनले भने । त्यस्तै कामदार बस्ने घरको पछाडिको भागमा समेत क्षति गरेको छ ।
सुख्खा बन्दरगाह भोटेकोसी नदीको किनारामा निर्माण भइरहेको छ । अहिले नदीमा पानीको सतह घटेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए । बाढीले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइट र आयोजना स्थलमा जाने पुलमासमेत क्षति गरेको आयोजनाका प्रशासकिय प्रमुख टिका पौडेलले बताए ।
अविरल वर्षा सँगैको पहिरोले पासाङल्हामु मार्ग र मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएको छ । पासाङल्हामु मार्गको ठूलो भार्कु, सानु भार्कु, राम्चे र स्याउबारीमा खण्डमा पहिरो गएको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकखण्ड बुधबारदेखि नै अवरुद्ध छ । अवरुद्ध सडकखण्डहरू खुलाउने काम अघि बढिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए ।